မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး ဖြေရှင်းတော့မယ့် (ကို)စိုးသူရဲ့ ဇနီးဟောင်း မခငယ် - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး ဖြေရှင်းတော့မယ့် (ကို)စိုးသူရဲ့ ဇနီးဟောင်း မခငယ်
မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး ဖြေရှင်းတော့မယ့် (ကို)စိုးသူရဲ့ ဇနီးဟောင်း မခငယ်
Apann Pyay 10:49 AM သရုပ်ဆောင်များ Edit
မြန်မာပြည်ရဲ့ တခေတ်တခါက နာမည်ကြီး ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသား စိုးသူကတော့ ပရိသတ်တွေကြား အမြဲရေပန်းစားလှပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရည် အနုပညာကြောင့် နာမည်ကြီးသလို ယခုအချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စဟာ ပရိသတ်တွေကြား စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။
အမေရိကားမှာ နေထိုင်တဲ့ ဇနီးဟောင်း မခငယ်နဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ တိုင်းသိပြည်သိ ပြသနာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ မင်းသားစိုးသူကလည်း မြန်မာပြည်မှာ ဒါဒါနဲ့ အတိအလင်းတွဲနေတာ ပရိသတ်ကြီး မျက်မြင်ပါ။ ဒီပြဿနာတွေ အေးနေပြီထင်ရပေမယ့် ယခုတခါ မခငယ်ဘက်က ဒီလိုဆိုလိုက်ပါပြီ ပရိသတ်ကြီးရေ….
“ကျမ မကြာခင်မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာမှာမို့ ကျမ ပြောခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုတွေဟာ လုပ်ကြံပြောဆိုခဲ့တယ် ဆိုလျှင် ကိုစိုးသူ ဘက်ကတရားဥပဒေ အရ လိုသလုပ်ပါ…
ဒါနဲ့အဲဂျာနယ် က ကိုစိုးသူရဲ့ အခုသတင်းရေးသူရဲ့ twist and turn လုပ်သလားလို့တောင်ထင်မြင်စရာဖြစ်လာတဲ့ ဆိုတဲ့ ရေးသားချက် ကို ကျမတို့ ကိစ္စပြီးရင် အဲဂျာနယ်တိုက်က ဘယ်လို ဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုတာ ကြိုစဉ်းစားထားပေးပါလို့….” လို့ သူမရဲ့ လူမှုစာမျက်နှာမှ တဆင့် တရားဝင်ရေးသားတင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
မွနျမာပွညျရဲ့ တခတျေတခါက နာမညျကွီး ဒိတျဒိတျကွဲမငျးသား စိုးသူကတော့ ပရိသတျတှကွေား အမွဲရပေနျးစားလှပါတယျ။ ငယျငယျကတော့ သူ့ရဲ့ ရုပျရညျ အနုပညာကွောငျ့ နာမညျကွီးသလို ယခုအခြိနျမှာတော့ သူတို့ရဲ့ အိမျထောငျရေးကိစ်စဟာ ပရိသတျတှကွေား စိတျဝငျစားစရာကောငျးလှပါတယျ။
အမရေိကားမှာ နထေိုငျတဲ့ ဇနီးဟောငျး မခငယျနဲ့ လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ တိုငျးသိပွညျသိ ပွသနာတှဖွေဈခဲ့ကွတာ အားလုံးလညျး သိပွီးဖွဈမှာပါ။ မငျးသားစိုးသူကလညျး မွနျမာပွညျမှာ ဒါဒါနဲ့ အတိအလငျးတှဲနတော ပရိသတျကွီး မကျြမွငျပါ။ ဒီပွဿနာတှေ အေးနပွေီထငျရပမေယျ့ ယခုတခါ မခငယျဘကျက ဒီလိုဆိုလိုကျပါပွီ ပရိသတျကွီးရေ….
“ကမြ မကွာခငျမွနျမာပွညျကို ပွနျလာမှာမို့ ကမြ ပွောခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုတှဟော လုပျကွံပွောဆိုခဲ့တယျ ဆိုလြှငျ ကိုစိုးသူ ဘကျကတရားဥပဒေ အရ လိုသလုပျပါ…
ဒါနဲ့အဲဂြာနယျ က ကိုစိုးသူရဲ့ အခုသတငျးရေးသူရဲ့ twist and turn လုပျသလားလို့တောငျထငျမွငျစရာဖွဈလာတဲ့ ဆိုတဲ့ ရေးသားခကျြ ကို ကမြတို့ ကိစ်စပွီးရငျ အဲဂြာနယျတိုကျက ဘယျလို ဖွရှေငျးပေးမလဲဆိုတာ ကွိုစဉျးစားထားပေးပါလို့….” လို့ သူမရဲ့ လူမှုစာမကျြနှာမှ တဆငျ့ တရားဝငျရေးသားတငျထားတာ တှရေ့ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….